Ndị Ohi Ezuola Mkpanaka Ndị Ụlọ Ọgbakọ Sineti
Ọ bụ nnọọ 'ọgbara ụwa ngharị' dịka ndị ohi wakọoro ụlọ ọgbakọ omebe iwu sineti ala anyị n'ụtụtụ ụnyaahụ wee zuru mkpanaka ha n'ebe ha na-enwere onwe ha ọgbakọ, ma fee ka nnụnụ, larie.
Dịka akụkọ siri wee kọọ, nke a mere ka ọ gachara nkeji ole na ole otu nwa amadi e nyere oche azụ n'ụlọ ọgbakọ ahụ, bụ Sinetọ Ovie Omo-Agege, batara ebe ahụ, bụkwa onye ndị akpụobi ruru iri n'ọnụ ọgụgụ soro n'azụ wee bata n'ogige ụlọ ọgbakọ ahụ. Ka ọ gachara tịnkọm tịnkọm ole na ole ha jiri batacha, ihe ọzọ a hụzịkwara bụ ka ndị akpụobi ahụ wụpụtasịrị ka enyi, wee ga maburu mkpanaka ahụ ebe e dobere ya n'ihu ọhà, tinye isi n'ezi ozigbo, larie ka mgbada; ọ dịghịkwa onye hụrụ ha anya ọzọ.
Akụkọ kọkwara na ha tiri onye ọrụ nchekwa nọ ebe ahụ gwoo gwoo ma tọbagodi ya n'otu akụkụ, oge ọ jụrụ na ha agaghị agafere.
Nke a mezịrị ka egwù dị ma wetekwa ọgbakọ ahụ n'isi njedobe nke mberede, ebe ndị ụlọ ọgbakọ nnọchi anya etiti jikwara maka nke ahụ wee bugharịa ọgbakọ nke ha kaara ịnọ ụbọchị ahụ ka ọ dịbazie ụbọchị ọzọ.
Mkpamkpa a bụ nke weere ọnọdụ ka o jiri ihe dịka nkeji isii wee gata elekere iri na otu nke ụtụtụ.
Ka ọ dị ugbu a, ndị ọrụ uwe ojii anwụchikọọla nwa amadi ahụ bụ sinetọ Omo-Agege dịka onye a na-enyo enyo na ọ ma banyere mwakpo ahụ, ebe ndị ụlọ ọgbakọ sineti ahụ nyezịkwara ndị isi ọrụ nchekwa dị iche iche iwu ka ha nwụchikọọ ndị kpara agwa ọjọọ ahụ, ma wechighatakwa mkpanaka ahụ azụ tupu awa iri abụọ na anọ na-abịa abị.